Weerar culus oo lagu qaaday Saldhig ku yaalla duleedka Baydhabo | KEYDMEDIA ENGLISH
Weerar culus oo lagu qaaday Saldhig ku yaalla duleedka Baydhabo
Mas'uuliyiinta amniga Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayaa sheegay inay khasaare gaarsiiyeen Al-Shabaab, islamarkaana ay Ciidamada iska caabiyeen weerarka.
BAYDHABO, Soomaaliya - Weerar xoog leh ayay Kooxda Al-Shabaab ku qaadey saakay saldhig Ciidamada dowladda Soomaaliya ku leeyihiin degaanka Deynuunay, oo qiyaastii 26-KM u jira magaaladda Baydhabo, ee xarunta gobolka Baay.
Sida wararku ay sheegayaan, weerarka ayaa isku bedelay dagaal toos ah oo faraha looga gubtay, iyadoo Al-Shabaab u suurta-gashay inay daqiiqado kooban la wareegto gacan ku heynta saldhigga, oo ahaa mid ay Ciidamada ka qaadi jireen howlgallada gobolka Baay.
Ugu yaraan shan Askari oo Ciidankii saldhiga ku sugnaa iyo kuwa gurmad ku yimid ayaa ku dhimatay dagaalka, iyadoo tiro kale ay ku dhaawacmeen, waxaana Saraakiisha amniga sheegeen in khasaaro intaasi ka badan ay gaarsiiyeen Al-Shabaab, inkastoo aan wali tirada rasmiga ah la ogeyn.
Qarax jidka ka yimaada Baydhabo, ee aada Deynuunay ku aastay Al-Shabaab ayaa lala eegtay Gaadiid dagaal oo gurmad ugu socday Ciidamada la weeraray, waxaana ku dhintay saddex askari, sida dadka degaanka ay u xaqiijiyeen Keydmedia Online.
Xaaladda Deynuunay ayaa markii dambe caadi kusoo laabatay, waxaana saldhiga amnigiisa lagu xoojiyay Ciidanka dheeraad ah, iyadoo cabsi laga qabo inay weerar kale oo rogaal-celis ah Kooxda Al-Shabaab kusoo qaado.
Comments Topics: al shabaab dagaal maamulka koonfur galbeed weerar